Kooxda Arsenal oo iska iibinaysa todobo ciyaaryahan maalmaha yar ee ka haray suuqa kala iibsiga xiddigaha – Gool FM
(London) 25 Agoosto 2021. Kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa la soo warinayaa inay iska iibinayso todobo ciyaaryahan todobaadka ugu dambeeya ee suuqa kala iibsiga xiddigaha.
Ka hor inta uusan xirmin suuqa kala iibsiga ciyaartoyda Kooxda Arsenal ayaa ku rajo weyn inay iska iibiso todobo xiddig.
Gunners ayaa bixisay lacag ka badan 100 milyan oo gini si ay u soo dhoweyso afar ka mid ah xiddigaha dhowaan Koxda yimid ee kala ah; Nuno Tavares, Albert Sambi Lokonga, Ben White, Aaron Ramsdale iyo Martin Odegaard.
William Saliba iyo Matteo Guendouzi labadooduba waxay dhammaystireen amaahdii ay ku aadeen Marseille, laakiin iibinta Joe Willock ee Newcastle United waxay ka dhigan tahay lacagta kaliya ee hadda Gunners kaga timid dhanka suuqa kala iibsiga.
Sida laga soo xigtay Jariiradda Evening Standard, ilaa todobo ciyaaryahan ayaa soo afjari kara joogitaankooda garoonka Emirates toddobaadka soo socda, waxaana hoggaaminaya Willian oo loo malaynayo inuu ku dhow yahay inuu beeca xorta ah ugu biiro Naadiga Corinthians.
Lucas Torreira ayaa ka degay Talyaaniga ka hor inta uusan amaah ugu biirin Fiorentina, halka Sead Kolasinac lagu soo warramayo inuu qarka u saaran yahay inuu u wareego Naadiga Fenerbahce, halkaasoo uu kula midoobi doono saaxiibkiisii hore iyo Gunners ee Mesut Ozil.
Eddie Nketiah, Reiss Nelson, Ainsley Maitland-Niles iyo Hector Bellerin ayaa sidoo kale la filayaa inay raadsadaan meelo kale oo cusub maalmaha soo socda, halka Gunners la filayo inaysan hor istaagi doonin Pierre-Emerick Aubameyang haddii dalab ku habboon addeegiisa la soo gudbiyo.
Kooxda PSG oo ka soo jawaabtay dalabkii ugu horreeyey oo ay Real Madrid ka gudbisay Kylian Mbappe